Masaajidka ha la xoreeyo ama ha laga xoroobo – Kaasho Maanka
Masaajidka ha la xoreeyo ama ha laga xoroobo
Dal kasta dadkiisa ayaa go’aan ka gaadha nooca xukun ee ay dooneyaan iyo kooxda xukumayasa. Qayb kasta oo ay bulshadu ka kooban tahay waxay leedahay si la mid ah qaybaha kale xaqqa in la doorto waxna ay doortaan si xor ah.
Bulshada Soomaaliyeed waxba kama duwana bulshooyinka adduunka ku nool, waxay ka kooban tahay wax kasta oo dad ama bulsho dal ku wada nooli ka kooban tahay, waase jiraan waxyaabo lagu kala duwan yahay. Dadku waxay u siman yihiin waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinimadu dhashay. Wadaadka, macallinka, askariga, ganacsatada, aqoonyahanka, siyaasiga, dhakhtarka iyo qaar kaloo badan ayaa qayb ka ah bulshada. Taa micneheedu waxaa weeye macalinka iyo wadaadku waa u siman yihiin waajibaadka iyo xuquuqda wixi sharcigu is dheeraysiiyo mooyaane.
Dadka Soomaaliyeed waa dad u qaybsan qabiilooyin, qabyaalad ayaana wax lagu qaybsada doorasho ha dhacdo ama yaanay dhicin.
Marka dawlad ama xukuumad cusub la soo dhisayo qolo kasta oo ka mida qabiilooyinka dalka wada leh waxay xukuumada iyo dawladda ku yeelanayaan metelaad, taliska talada haya waxaa muhiim ah inuu noqdo muraayad la iska wada arko. Talada dalkuna waxay ahayd inay ka go’do dadkaa madaxda ah ee loo igmaday inay taliyaan.
Ciidamada qalabka sida ma faro gelin karaan talada siyaasadeed ee dawlada shaqadoodu waa difaaca xuduudaha dalka iyo sugidda amniga gudaha, xaalada kooban oo sharcigu qeexay ayay faro gelin samayn karaan. Macallinka shaqadiisua waa waxbaridda iyo soo saarista fac cusub oo dalka iyo dadkaba wax u tara, dhakhtarkuna waa inuu ka shaqeeyo bed-qabka iyo caafimaadka dadwaynaha.
Hadaba wadaadka shaqadiisu maxay tahay? Diintu ma leedahay mase u baahan tahay dad metela? Masaajidda maxaa loo dhisay? Wadaadku waa qof bartay cilmi diimeed, shaqadiisu waa inuu baro ciddii rabta cilmigaa u yaqaan. Masaajid waxaa loo dhisaa oo keliya in lagu tukado, balse dawladaha Carbeed, gaar ahaan dawladda Sucuudigu waxay u bedeshey masaajiddii meelo laga faafiyo dacaayadaha iyo farriimaha u danaynaya dawladdaas. Ninka wadaadka ah ee masaajidka maamula waxa uu mushahar ka qaata sirdoonka dawladda sucuudiga, waana koox loogu talo galay inay metelaan danaha dawladahaas mushaharka siiya.
QORMO LA XIRIIRTA: Meherka Masaajidka
Wadaadku waa reer hebel hadey qabyaalad noqoto, cilmi hadey noqotona dhakhtarka iyo macalinka waxba kama duwana oo siyaasada iyo in dawlada masaajidka laga dacaayadiyo shaqadiisa maaha.
Wadaadku waa halka dalka laga dumineyo, masiibooyinka ummada Soomaaliyeed ku dhacayna wadaad bay ku soo daba gabadeen ama isagaaba keenay.
Wadaadka in lagu sii daayo inuu xad gudbo waa ayaan darro wayn oo dhali doonto inuu dadka ku kiciyo dawladda ama maamulka meesha ka jira. Danta uu wadaadku wadaa waa mid shisheeye, wuxu wadaa dhalan rog bulsho, goor ay ahaatoba waa in la hela cid wadaadka runta u sheegta.
Wadaadku wuxuu maanka dhallaanka ku shubaa in dawladnimada, wadaniyadda, diimuqraadiyadda, sinnaanta iyo wax walba oo dawladda la xidhiidha ay xaaraan yihiin. Wuxuu taa dhinac wadaa inuu tirtiro asalka ummadda Soomaaliyeed isagoo ku boorriya dhalinta inay Af Carabeedka bartaan Af Soomaaligana iska dhaafan taasoo aakhirka dhalaysa inaan afka iyo dhaqankeennu dabar go’o.
Dadka maamulka meesha ka jira ayay u doorteen inuu woxooda u maamulo dhexna u noqdo wadaadkooda iyo waranlohooda. Masaajidkana waxay u dhisteen inay ku tukadaan. Yaan la isku qaldin labadaa arrin.
Qofka Soomaaliyeed waa inuu ogaada isaga iyo Illaaha uu caabudo inaanay jirin cid u dhexeyasa ama u kala dab qaada. Qofka diinta kaa badiya haddaad addoon u noqoto waa dhibaato.
Wadaadku waa calooshii u shaqayste ku xidhan dawlado shisheeye. Masaajiddii loogu talo galay in lagu caibaadeysto waxay u bedeleen meelo laga faafiyo borobagaandada shisheeyaha.
Soomaalidu waa inay iska qabtaan kooxa diimeedyada aayohooda iyo jiritaankooda halista ku ah, oo ay go’aan ka gaadhan intaan xaalaku sidan ka darin. Waa in la hela jaamacado iyo masaajiddo ka madax banaan maalgelinta iyo saamaynta shisheeyaha.
QORMO LA XIRIIRTA: Mindida waqtigaa af-tira (2/2)
Masaajidda geyigeena ka jiraa maanta waa goobo laga cadaadiyo dadka Soomaaliyeed. Xeerkii dawladdu ansixisaba wadaado ayaa masaajidda kaga soo qaylinaya, kadibna waa la laalay ayaad maqlaysaa. Xaguu ka keenay awoodda uu ku faro gelinayo dawladda? Shaqadiisa maaha inuu siyaasad ka hadlo. Hadiise tiisa la yeeleyo maxaynu maamulka u dhisanay? Xaalku wuxuu maanta taagan yahay wadaad hadaad isku dhacdaan oo danihiina gaarka isku fahmi waydaan, masaajid uu furihiisa hayo ayuu furan halkaasuna kasoo habaraaya.
Dadka iyo maamuladu waa inay fahmaan diintu inaanay ahayn xirfad lagu shaqaysto oo lacag laga sameeyo. Wadaadku waa inuu bartaa xirfad uu noloshiisa ku debero oo ka madax banaan ku shaqaysiga diinta.
Talisyada geyigeena ka jira iyo dadka Soomaaliyeedba waxaan kula talin lahaa laba mid uun inay yeelaan, inay masaajida xoreyaan oo gacan iyo maskax Soomaaliyeed kusoo celiyaan, ama in laga xoroobo oo laga dareero gebi ahaanba oo nin walba danihiisa raacdo wadaadkana la yidhaahdo qaylada iyo buuqa naga daa.
Doodda Akhlaaqda (Morality)
Dooddani waa mid culus oo soo jireena, in badanna u dhaxaysey dadka Eebbe rumaysan (Theists) iyo dadka aan Eebbe rumaysanayn (Atheists) sida dad badan oo Soomaliyeed uga hadlaana uma fududa, doodduna ma aha dood qofeed ee waa dood aragtiyeed, waana dood dadka Eebbe rumaysan ugu jirta halka doodda Hoogga iyo Hallaaga adduunku (Proplem of Evil and suffering) ugu jirto dadka aan Eebbe rumaysnayn.
W/Q: Kaasho Maanka 25th September 2018